Dzimwe ndege kuenda kuBonaire kubva kuUSA kuDelta, America neUnited izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Dzimwe ndege kuenda kuBonaire kubva kuUSA kuDelta, America neUnited izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Tourism Corporation Bonaire (TCB) iri kuzivisa hurongwa hwendege kubva kuAmerican Airlines, Delta Air Lines, uye United Airlines kwemwedzi iri kuuya.
Ose maDelta Air Lines neAmerican Airlines ari kuona yakanaka mamiriro uye kubhucha kudiwa kwechitsuwa ichi.
United Airlines ichatangazve kuenda kuBonaire kubva kuHouston neNewark munaNovember.
Chitsuwa cheDutch Caribbean cheBonaire chinogamuchira kudzoka kwendege dzinotakura vafambi kubva kuUS.
Kutevera kuburitswa kwakabudirira kwendege kubva kuUS munaJune kuenda kuchitsuwa cheDutch Caribbean cheBonaire, Tourism Corporation Bonaire (TCB) iri kuzivisa hurongwa hwendege kubva kuAmerican Airlines, Delta Air Lines, uye United Airlines kwemwedzi inotevera.
Sechikamu cheRwendo Rwedu rwekuDzoreredza, Tourism Corporation Bonaire ichaenderera nekuedza uku kwekuramba uchiona kukurudzira kune vashanyi kuchitsuwa ichi, uye nehupfumi hwenharaunda.
zvose zviri zviviri Delta Air, uye American Airlines iri kuona yakanaka, uye kubhuka kudiwa kwechitsuwa. Saka, uyu mukana wakanaka wekuwedzera huwandu hwendege kuenda kuBonaire.
Parizvino kusvika munaNovember 20, 2021; Delta ine ndege yemugovera yemusi weMugovera yakarongerwa kuenda kuBonaire kubva kuAtlanta, Georgia, uye ndege iyi yevhiki ichawedzera kusvika nendege mbiri dzevhiki nevhiki neChitatu neMugovera pakati paNovember 24, 2021 -December 15, 2021. Ipapo kutanga musi waZvita 18, 2021 kusvika Ndira 4, 2022 pachave nendege dzezuva nezuva kunze kweChipiri. Kubva muna Ndira 5, 2022 kusvika Kubvumbi 9, 2022 kune Muvhuro, Chitatu, Chishanu neMugovera ndege yakarongwa.
American Airlines yazvino kubhururuka purogiramu kusvika munaNovember 6, 2021 ndege mbiri dzevhiki nevhiki neChitatu neMugovera kubva kuMiami, Florida. Kutanga Mbudzi, 2021 kusvika Ndira 3, 2022 ndege yeMuvhuro ichawedzerwa munzira. Zvakare, pachave paine nendege dzezuva nezuva dzinoenda kuBonaire panguva yezororo, kubva Zvita 16, 2021 kusvika Ndira 3, 2022.
Musi waNovember 6, 2021 United Airlines irikumutsirazve nendege dzayo kubva kuHouston, Texas nendege yevhiki nevhiki kuenda kuBonaire nemugovera nekudzoka nendege musi weSvondo, uye vhiki nevhiki Mugovera kubva kuNewark, New Jersey.